Ọrụ Ndịozi 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọrụ Ndịozi 12:1-25
12 N’ihe dị ka n’oge ahụ, Herọd bụ́ eze malitere imeso ụfọdụ n’ime ndị nọ n’ọgbakọ mmeso ọjọọ.+
2 O ji mma agha+ gbuo Jems nwanne Jọn.+
3 Ebe ọ hụrụ na ọ dị ndị Juu mma,+ o jidekwuru Pita. (Dị ka o si dị, ụbọchị ndị ahụ bụ ụbọchị ememme achịcha na-ekoghị eko.)+
4 Mgbe o jidere ya, ọ tụbara ya n’ụlọ mkpọrọ,+ nyefee ya n’aka ìgwè ndị agha anọ dị mmadụ anọ anọ bụ́ ndị na-agbanwerịta onwe ha iche ya nche, ebe o bu n’uche ịkpọpụtara ya ndị Juu ma ememme ngabiga gasịa.+
5 N’ihi ya, e debere Pita n’ụlọ mkpọrọ; ma ọgbakọ ahụ nọ na-ekpekusi Chineke ekpere+ ike maka ya.
6 Mgbe Herọd na-aga ịkpọpụta ya, n’abalị ahụ Pita bu ụdọ ìgwè abụọ e kere ya na-ehi ụra n’agbata ndị agha abụọ, ndị nche nọkwa n’ọnụ ụzọ na-eche ụlọ mkpọrọ ahụ nche.
7 Ma, lee! mmụọ ozi Jehova guzoro nso,+ ìhè nwukwara n’ime ụlọ mkpọrọ ahụ. Ọ kụtụrụ Pita aka n’akụkụ, kpọtee ya,+ sị: “Bilie ọsọ ọsọ!” Agbụ ígwè e kere ya n’aka wee dapụsịa.+
8 Mmụọ ozi+ ahụ sịrị ya: “Kee ihe n’úkwù gị, yirikwa akpụkpọ ụkwụ gị.” O wee mee otú ahụ. N’ikpeazụ, ọ sịrị ya: “Yiri uwe elu gị,+ soro m.”
9 O wee pụọ, soro ya na-aga, ma ọ maghị na ihe ahụ nke na-eme site n’aka mmụọ ozi ahụ na-eme n’ìhè. N’eziokwu, o chere na ya na-ahụ ọhụụ.+
10 Ka ha gafeere ìgwè ndị nche mbụ na nke abụọ ha rutere n’ọnụ ụzọ ámá e ji ígwè mee nke e si abanye n’ime obodo, nke a meghekwaara ha n’onwe ya.+ Mgbe ha pụsịkwara ha gbadakwuru n’otu okporo ámá, ozugbo ahụkwa mmụọ ozi ahụ hapụrụ ya.
11 Mgbe Pita ghọtara onwe ya, ọ sịrị: “Ugbu a ka m maara n’ezie na Jehova zitere mmụọ ozi+ ya wee napụta+ m n’aka Herọd nakwa n’ihe niile ndị Juu nọ na-atụ anya ya.”
12 Mgbe o chesịrị echiche banyere ya, ọ gara n’ụlọ Meri nne Jọn, onye a na-akpọkwa Mak,+ bụ́ ebe ọtụtụ mmadụ zukọtara na-ekpe ekpere.
13 Mgbe ọ kụrụ aka n’ọnụ ụzọ ámá, otu nwa agbọghọ na-eje ozi, onye aha ya bụ Roda, bịara ịmara onye na-akụ aka,
14 ozugbo ọ ghọtara na ọ bụ olu Pita, ọṅụ ekweghị ya meghee ọnụ ụzọ ámá ahụ, kama ọ gbabara n’ime ụlọ ma kọọ na Pita guzo n’ihu ọnụ ụzọ ámá ahụ.
15 Ha sịrị ya: “Ara na-agba gị.” Ma ọ nọgidere na-ekwusi ike na ọ bụ otú ahụ ka ọ dị. Ha malitere ịsị: “Ọ bụ mmụọ ozi ya.”+
16 Ma Pita nọgidere n’ebe ahụ na-akụ aka. Mgbe ha meghere ụzọ, ha hụrụ ya, o wee ju ha anya.
17 Ma o feere+ ha aka ka ha ghara ikwu okwu, o wee kọọrọ ha n’ụzọ zuru ezu otú Jehova si kpọpụta ya n’ụlọ mkpọrọ, o wee sị: “Kọọrọnụ Jems+ na ụmụnna ihe ndị a.” Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ pụrụ gawa ebe ọzọ.
18 Otú ọ dị, mgbe chi bọrọ,+ e nwere ọgba aghara dị ukwuu n’etiti ndị agha ahụ banyere ihe mere Pita.
19 Herọd+ chọsiri ya ike, mgbe ọ na-achọtaghị ya, ọ gbara ndị nche ahụ ajụjụ ma nye iwu ka a kpụpụ ha ma nye ha ntaramahụhụ;+ o wee si na Judia gbadaa Sesaria ma nọtụ n’ebe ahụ.
20 Ma Herọd nọ na-eweso ndị Taya na ndị Saịdọn iwe dị ukwuu. Ya mere, ha ji otu obi bịakwute ya, mgbe ha mesịkwara ka Blastọs, bụ́ onye na-elekọta ụlọ ihi ụra eze, kweta, ha malitere ịrịọ ka ha kpezie, n’ihi na e si ná mba onye eze ahụ na-enye mba ha ihe oriri.+
21 Ma n’ụbọchị a kara aka, Herọd yiiri uwe onye eze ma nọdụ ala n’oche ikpe wee malite ịgwa ha okwu n’ihu ọha.
22 Ndị ahụ zukọtara malitere iti mkpu, sị: “Ọ bụ olu chi, ọ bụghị olu mmadụ!”+
23 Mmụọ ozi Jehova tiri ya ihe ozugbo,+ n’ihi na o nyeghị Chineke otuto ahụ;+ ikpuru tagburu ya, o wee kubie ume.
24 Ma okwu+ Jehova nọ na-eto eto ma na-agbasa.+
25 Ma mgbe Banabas+ na Sọl zigachara ihe enyemaka+ ahụ dum na Jeruselem, ha laghachiri, ha kpọkwaara Jọn,+ onye a na-akpọ Mak.
Ọrụ Ndịozi 12
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D44%26Chapter%3D12%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl